News Feed Archives | Page 18 of 41 | Frontier Myanmar
ကျော်လင်းထွန်း လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့က အသစ်ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် ဦးဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကာ ဌာနသုံးခု ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းသွားမည် ဖြစ်သည်။ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောကြားချက်အရ ဝန်ကြီးဌာနသစ်ကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုကော်မရှင် (MIC)နှင့် စီးပွားရေးနှင့်.
ကျပ် ၅၀၀ တန် အစားအသောက်များ ရောင်းချမည့် စင်ကာပူပွဲတော် ပြုလုပ်မည်
ရဲမွန် စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ ခရီးသွားကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ရည်ရွယ်၍ စင်ကာပူခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့က ရန်ကုန်မြို့လယ် ဘိုကလေးဈေးလမ်းတွင် စင်ကာပူပွဲတော်ကို နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်နေသည်။ သုံးရက်ကြာပြုလုပ်မည့် စင်ကာပူပွဲတော်တွင် စားသောက်ဆိုင်တန်းငယ်ဖြင့် ဆိုင် ၂၀ ခန့်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူအစားအစာများနှင့် မြန်မာအစားအစာများကို စင်ကာပူနိုင်ငံ၏ ပြား.
Auntie Anne’s ဆိုင်ခွဲ ရန်ကုန်၌ ပထမဆုံး ဖွင့်လှစ်တော့မည်
အမေရိကန်အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ မှာ ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၁,၈၀၀ ကျော် ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Auntie Anne’s ကို ရန်ကုန်မြို့မှာလည်း ဖွင့်လှစ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Anne’s ဟာ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုင်ရှိ လူမြင်ကွင်း မီးဖိုချောင်တွင် လတ်ဆက်စွာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်လုပ်မုန့်တွေကြောင့် လူသိများပါတယ်။.